Eksodus 33 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
Genesis Eksodus Levitikus Numeri Duteronomi Yoshuwa ABagwebi Rute 1 Samuweli 2 Samuweli 1 Kumkani 2 Kumkani 1 Kronike 2 Kronike Ezra Nehemiya Estere Yobhi INdumiso IMizekeliso INtshumayeli INgoma yazo iiNgoma Isaya Yeremiya IZililo Hezekile Daniyeli Hoseya Yoweli Amosi Obhadiya Yona Mika Nahum Habhakuki Zefaniya Hagayi Zekariya Malaki Mateyu Marko Luka Yohane IZenzo Roma 1 Korinte 2 Korinte Galati Efese Filipi Kolose 1 Tesalonika 2 Tesalonika 1 Timoti 2 Timoti Tito Filemon Hebhere Yakobi 1 Petros 2 Petros 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda ISityhilelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
33 Wathi ngokubhekele phaya uYehova kuMoses: “Hamba, unyuke umke apha, wena nabantu obakhuphileyo ezweni laseYiputa,+ uye kulo ilizwe endalifungela uAbraham, uIsake noYakobi, ndisithi, ‘Ndiya kulinika imbewu yakho.’+ 2 Ndothumela ingelosi phambi kwakho,+ ndiwagxothe amaKanan, ama-Amori, namaHiti namaPerizi, amaHivi namaYebhusi;+ 3 niye ezweni eliqukuqela ubisi nobusi,+ kuba andisayi kunyuka ndiphakathi kwenu, ngokuba nisisizwana esintamo-lukhuni,+ hleze ndinitshabalalise endleleni.”+ 4 Bathi bakuliva abantu eli lizwi libi, bazila;+ akwabikho namnye kubo uzinxibayo izihombo zakhe. 5 Wathi uYehova kuMoses: “Yithi koonyana bakaSirayeli, ‘Nisisizwana esintamo-lukhuni.+ Ndingathi ukuba ndikhe ndanyuka phakathi kwenu, umzuzwana nje,+ ndinitshabalalise ngokuqinisekileyo. Ke ngoko khululani izihombo zenu, ndibone ukuba ndingenza ntoni na ngani.’”+ 6 Bazihluba oonyana bakaSirayeli izihombo zabo ukusuka eNtabeni yeHorebhe+ ukusa phambili. 7 Yena ke uMoses, wayithabatha intente yakhe, wayimisa ngaphandle kwenkampu, kude nenkampu; wayibiza ngokuba yintente yokuhlangana. Yaye wonk’ ubani owayefuna ukubuzisa+ kuYehova waphuma waya ententeni yokuhlangana, eyayingaphandle kwenkampu. 8 Wathi nje akuphuma uMoses ukuya ententeni leyo, basukuma bonke abantu,+ ngamnye wema emnyangweni wentente yakhe, bamondela uMoses wada waya kungena ententeni. 9 Kwathi nje akuba engenile uMoses ententeni, kwehla umqulu welifu,+ wema emnyangweni wentente leyo waza wathetha+ yena noMoses. 10 Bawubona abantu bonke umqulu welifu+ umi emnyangweni wentente leyo, basuka bema bonke abantu baza baqubuda ngamnye esemnyangweni wentente yakhe.+ 11 UYehova wathetha kuMoses ubuso ngobuso,+ njengomntu ethetha nedlelane lakhe. Xa wabuyela enkampini, umlungiseleli wakhe+ uYoshuwa, unyana kaNun,+ ongumlindi, akasukanga yena ngaphakathi kwentente leyo. 12 Wathi uMoses kuYehova: “Uyabona, uthi kum, ‘Nyusa esi sizwana,’ kodwa akundazisanga lowo uya kumthumela kunye nam. Ngaphezu koko, wena ngokwakho uthe, ‘Ndikwazile ngegama yaye,+ ngapha koko, ukholekile emehlweni am.’ 13 Ke kaloku, ukuba ndikholekile emehlweni akho,+ nceda undazise iindlela zakho,+ ukuze ndikwazi, nokuze ndikholeke emehlweni akho. Uze ukhumbule ukuba olu hlanga lungabantu bakho.”+ 14 Ngoko wathi: “Mna ngenkqu ndiya kuhamba nawe,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukunika ukuphumla.”+ 15 Wathi kuye: “Ukuba wena ngenkqu akuhambi nathi, musa ukusinyusa simke apha. 16 Kuya kwaziwa njani na, kaloku, ukuba ndikholekile emehlweni akho, mna nabantu bakho? Akungokuthi na uhambe nathi,+ ndahluke mna nabantu bakho ebantwini bonke abaphezu komhlaba?”+ 17 Yaye uYehova wahlabela mgama wathi kuMoses: “Nale nto uyithethileyo, ndiya kuyenza,+ kuba ukholekile emehlweni am yaye ndikwazile ngegama.” 18 Wathi yena: “Khawuncede, undibonise ubuqaqawuli bakho.”+ 19 Kodwa wathi: “Ndiya kukudlulisa konke ukulunga kwam phambi kobuso bakho,+ ndivakalise igama likaYehova phambi kwakho;+ ndikholiswe ngulowo ukholekileyo kum, ndimenzele inceba lowo ndiya kuba nenceba ngaye.”+ 20 Wongezelela wathi: “Akunakububona ubuso bam, kuba akukho mntu unokundibona aze aphile.”+ 21 Wathi uYehova ngokubhekele phaya: “Nantsi ke indawo ngakum, uze ume phezu kweliwa. 22 Kothi ke ekudluleni kobuqaqawuli bam ndikubeke emngxunyeni weliwa, ndize ndibeke intende yam phezu kwakho njengomkhusane ndide ndidlule. 23 Emva koko ndoyisusa intende yam, yaye uya kuthi ke eneneni uwubone umva wam. Kodwa bona ubuso bam abunakubonwa.”+